U-Anja Schaap ufumene efile elwandle ngaphezu kweeWadden Islands, kodwa yiyiphi iinqanawa (myshiptracking.com)? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	20 Juni 2019	• 21 Comments
Kwakuyiindaba ezinkulu izolo, kuba u-Anja Schaap wayefunyanwe efile elwandle. Akunjalo nje ulwandle, kodwa uLwandle oluMntla: ngaphezu kweiWadden Islands (njengengxelo yeendaba). Nangona kunjalo, ukuba sijonge imbali yokuthumela ngosuku kunye nexesha lokufumana kwakhe (18 Juni 13: i-30 iyure), ngoko akukho nendawo yokuthunyelwa apho. Akukho ndawo kwimbali yokulandelela inokuthi ibonwe kwinqanawa esuka kummandla wonxweme ibonwe kwiinqanawa zaseJamani (ukuba u-Anja wayifumene). Kubonakala ngathi kuya kucaca ngakumbi ukuba sijongene ne-PsyOp (ukusebenza kwengqondo).
Yonke imikhombe mayibe ne-GPS-like tracker ebhodini (enye Inkqubo ye-AIS), ukuze unogada wonxweme abone ukuba yeyiphi imisebenzi eyenzeka elwandle. Unokukuthelekisa oku kunye nokulandelwa kweenqwelo zeenqwelo moya. Sibheke kwiwebhusayithi myshiptracking.com ngoko-18 Juni 13: Iyure le-30 kukho iinqanawa ezininzi ezibonakalayo phakathi kweeWadden Islands neFriesland. Iinqanawa ezimbalwa ezibonakala ngasentla kwiiWadden Islands (apho ziza kufumaneka khona) zonke iinqanawa zijikeleze ii-9 knots (okanye ngaphezulu) okanye zihamba ngomgama ngokukhawuleza nge-bend German. Ukuba ubona isidumbu esintantayo elwandle kubonakala sengathi uya kulala. Ukongeza, akukho nqanawa yolondolozo lwamanxweme okanye i-brigade yokuhlangula iyasebenza. Ngaphezu koko, unokuzibuza ukuba unokwenyuka njani ukusuka eKatwijk ukuya kwiWadden Sea (ukuba loo nto iyinkolelo) nokuba ngaba kunokwenzeka ukuba ulungelelanise umzimba ojikelezayo (ohamba nje kuphela ngenxa yokuchithwa kwenkqubo kunye nokwakheka kwegesi emzimbeni) ukubona ulwandle.
Funda kweli nqaku inkcazo ecacileyo yendlela kwaye kutheni le nto mhlawumbi i-PsyOp ukuzisa iSherlock Holmes. Ndiyifunde ngokwenene!
Uludwe lwekhonkco lovimba: myshiptracking.com, telecomabc.nl
tags: esebenzayo, Anja, app, qalisa, iinqanawa, ukufa, kuhamba, eziziimbalasane, fu maneka, GPS, Holmes, umzimba, KuLwandle oluMntla, Iigusha, nqanawa, skipper, USherlock, ukulandelela umkhombe, yokulandelela, ngomkhumbi, lokuloba, IIest Frisian Islands, ULwandle oluthile, yintoni, Zee
20 Juni 2019 kwi-11: 39
Ndicinga ukuba kukuhle ukubona umntu ogqoke iimpahla ezimnyama ezihamba elwandle. Emva koko kufuneka ube neenyawo zamehlo.
20 Juni 2019 kwi-23: 45
Umbuzo: Umndeni wakwaSchaap unombulelo kakhulu kubasebenzi bekhephe ngenxa yokuba bathathe u-Anja ngaphandle kwamanzi. "Umthetheli wahlala naye kwiiyure ezintathu waza wanikezelwa kumagunya apho.
Ngoko ke umkhombe kufuneka ube nokuphumla ubuncinane kwiiyure ze-3 kuLwandle oluMntla kwiiWadden Islands. Oku akunjalo kwimbali ye-myshiptracking.com.
20 Juni 2019 kwi-12: 28
Njengokuba ngummi olungileyo (funda i-inoffizieller mitarbeiter) yena kufuneka afake i-Burger Net kunye ne-Sherlock yohlelo kwaye asebenze njengokwandiswa kwezixhobo zombuso.
20 Juni 2019 kwi-17: 11
Ingaba sele iyaziwa ukuba yintoni umkhombe waseJamani ubizwa, inombolo?
Ukuba kwakuyinqanawa yaseMadurodam, ingaba yiFlying Dutchman, kunjalo?
Ingaba iindaba ezi zinto zibonakala kwi-TV yaseJamani ngoku ukuba yayiyinqanawa yaseJamani? Mhlawumbi u-De Mol angabiza oogxa baseJamani ngale nto, badibanise iindaba ngoomzekelo. Ndiza kunika intetho yamahhala.
20 Juni 2019 kwi-19: 59
kakuhle ucinga ukuba umphathi onjalo waseJamani uza kuthathwa njengeqhawe kwaye aphethwe yimiba yeendaba zombini ... ezintle ubudlelwane, akukho nelo thuba elilahlekileyo.
Ulungelelaniso? Abenzi nto into eqhelekileyo abasolwayo, ngoku siza kukhaba iingcango ezivulekileyo kunye neLanga edidanisayo 😀
20 Juni 2019 kwi-19: 46
I-33 yeegusha ke ayisasemdeni kwaye ayizange ibe khona nantoni na, into ebuhlungu.
21 Juni 2019 kwi-00: 17
Isimo esilandelayo (jonga ividiyo ezantsi ukusuka kwi-3: 25 min)?
1. "U-Anja" waphoswa kwiLwandle oluMntla
2. I-skipper yaseJamani mhlawumbi ngumbulali wayo
3. U-Anja wazinikela ngokuzicima
Kwaye baninzi baninzi abangaphinda baqwalaselwe.
Ukuqwalaselwa kukaKatwijkers ukuba kuphela izinto ezihlambulukileyo kufuneka ukuba zinqotshwe. Abo bantu bayazi ulwandle lwabo. Ngenxa yoko le ntengiso ishicilela:
21 Juni 2019 kwi-00: 45
Ukusasazwa kwomsasazo kubonakala kufana nomntu odidekile.
Wayehamba ngelobusuku kunye neenkuni zengxowankulu zokuqhawula kunye nengxowa yakhe emanzini
Kwaye bahlala bethetha okuthile malunga nayo, ukuhamba kulungile kwimpilo yakhe kwaye uphucula. Wahamba ngcono naye.
Ingaba mhlawumbi wagijima waya elwandle?
Zonke iimeko zigcinwa zivulekile.
Kodwa inyaniso kukuba iifoto zikaAnja zonke zibonakala zingalindelekanga.
Yaye inyaniso kukuba ummelwane wakhe uphonswe kwividiyo yeTV yeWest
I-Cat (umelwane) -Schaap-De Hond-Pauw, abasolwandle abaqhelekileyo abakwaziyo ukufumana okwaneleyo ukukhokela abantu abangenangqondo malunga nomyezo ...
21 Juni 2019 kwi-00: 18
.. Ndiyalilibala iDe Mol ngokuvuyela ngokupheleleyo 😛 ... zoo eMadurodam isondele ngokupheleleyo 😀
22 Juni 2019 kwi-22: 14
Umzekelo wendlela ukuveliswa kwe-ANP De Mol kubandakanyeka kwi-psyops. cinga ngePoelenburg kunye nePowNed.
"Amapolisa asola ukuba iincwadana zazingabancedisi bakaPegida, kodwa bebenzela i-ANP e-Eindhoven."
23 Juni 2019 kwi-00: 57
Hayi? Ngaba ubona ikhadi lokunyanzela ipolisa? Yiyiphi ikhadi lokushicilela yamapolisa? Uhlobo lwekhadi olubonisa ukuba ulawula i-psyop?
21 Juni 2019 kwi-09: 26
Madurodam okanye mhlawumbi uArtis njengegama elinikezwe inani elikhulu lezilwanyana ezihamba apha.
21 Juni 2019 kwi-10: 16
Ngokuqhelekileyo zonke ezo zilwanyana kwilizwe lembali. UGerrit Zalm, uPaul de Leeuw.
21 Juni 2019 kwi-10: 38
Kwinye yeenkcukacha zeenkcukacha ze-avatar kule mlinganiso (ubukumkani bezilwanyana, apho 'isilwanyana' singathatyathwa khona yi-avatar), izilwanyana zithathe isigqibo esicacileyo sokubonisa ukuba i-goyim iyadlala. Yingakho ezi zi-avatars, eziqhutywa yintsimi yamandla aseLuciferian, zifihla phantsi kwegama lezilwanyana.
ukiki wabhala wathi:
21 Juni 2019 kwi-12: 16
Ngokutsho kweendaba, umphathi-3 wayehlala naye iiyure
Ixesha le-3 yi-666 kodwa i-3 * 60 = 18 1 + 8 = I-9 nummorology I9 iphelile
Iimpawu ezinkulu kumbuzo wombuzo ❔
Ukuba usaphila unako ukuqhubeka phantsi kolwazi olutsha ...
Uhlelo lokusebenza lweSherlock kunye nokudibanisa nale meko?
21 Juni 2019 kwi-16: 59
Anikaze wazi ukuba i-mole mole ifuna iigusha ...
Flashstra wabhala wathi:
21 Juni 2019 kwi-23: 07
Kukho iinqanawa ezihamba ngeeyure ezininzi ukusuka kunxweme lweVlieland kwaye yile nqanawa yaseJamani iVerrourouwen. https://www.marinetraffic.com/nl/ais/details/ships/211319670
Kukho iinqanawa ezintathu ezibizwa ngokuba yi-trust kodwa ezi ndlela zihamba kuphela kwindawo kwi-radar.
Ngokukodwa malunga ne-13: I-30 ishiya iinqanawa emva kokuba ijikeleze yonke intsasa, ikhefu lokugqibela le-4 apho iinqununu ezine 0.1 kunye ne-0.2.
Akukufaneli ukuba umzimba wakhe ufunyenwe nge-13: 30 ize ihanjiswe kumagunya amathathu emva kweeyure.
Andikwazi ukufumana inqanawa ngaphandle kweTrust emiyo yoLwandle lwaseWadden ngaloo mini.
22 Juni 2019 kwi-08: 58
Ewe ngokwenene uFlitstra ngaphandle ngaphandle kokungahambisani nexesha, isikhundla asichanekanga.
Kuthiweyo kumaphephandaba ukuba abasebenzi bafunyenwe nje ngentla kwisiqithi saseSchiermonnikoog. khangela ikhonkco elingezantsi.
22 Juni 2019 kwi-14: 06
I-Anass Aouragh psyop pathologist inokuphinda ithi kwakhona ... kwaye loo ndlela: yebo, okunokwenzeka ukuba:
23 Juni 2019 kwi-11: 25
Hayi, kuninzi ukuthetha nokubhala ngabo.
Nangona kunjalo, siphila kwindawo yokuthula, ekhohlisayo, enobuqili
apho abafana abavela kwiskripthi baqhuba iFama yezilwanyana kunye namakhoboka bacinga ukuba kulungile.
Amakhoboka akhusela amakhosi abo.
« U-Anja Schaap ufumene efile elwandle ngeenqwelo zaseJamani? Ngaba oko kunokwenzeka ngokwemithetho yemvelo?
Asikwazi ukusombulula iingxaki kwihlabathi ngokucinga nokuthetha, kodwa ngale ndlela: »
Iindwendwe ezipheleleyo: 165.108